Waa kuma Ciyaaryahan Saciid Ducaale? – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Waa kuma Ciyaaryahan Saciid Ducaale?
By Abdihakim Sharif Ali / March 30, 2019 March 30, 2019
Tartamada Kubadda Cagta waxaa ay soo bilowdeen Soomaaliya intii aysan gobanimada qaadan ka hor sannaddadii kontomaadkii, waxayse waayadaa Soomaaliya horumar aad u wayn ay ka samaysay xagga k/cagta qaaradda afrika iyo Waddamada Carabta.
Waxaa kooxaha ugu caansanaa ee Africa iyo Carabta ka muuqday ka mid ahaa kooxdii Horseed, Jeenyo ama LLPP, Gaadiidka iyo Munacipio ama dowladda Hoose.
Ciyaartooy fara badan, ayaa ku soo caan baxay dhinaca kubadda Cagta, waxaana ka mid ahaa Ciyaartoyga lagu magacaabo Siciid Ducaalae oo taageerayaasha kolka uu soo galo garoonka ay ugu yeeri jireen maliku al-kurra, haatanna si aad ahi caan uga ah magaalada cadan ee dalka yemen.
Ducaale markiisii hore waxaa uu u ciyaari jiray kooxda booliiska, hase yeeshee kolkii laysu geeyay labadii kooxood booliska iyo ciidamada Xoogga Dalka ayaa magaca Horseedna loo bixiyey, isaga ayaa waxaa uu ka mid noqday ciyaartoydii nasiibka u yeelatay in ay matalaan kooxdaasi.
Siciid Ducaale waxaa uu ahaa nin la tirsado laadadka xorta ah kolka loo dhigo sida badan, waxay ahaayeen goolal, kubadda Iscuruuga ama jarriinka waxaa la dhihi karayaa waxaa uu ka mid ahaa ama uu ahaaba ninkii ugu horreeyay Soomaaliya kubadda jarriinka adeegsada inta badan marka uu laadayo laadadtka xorta ah, wuxuu kaloo ahaa weeraryahan celcelis ah oo daran, horseed waxaa uu u qaaday horyaallo iyo koobab fara badan.
Waxaa kaloo ay soo qaadeen xilligii uu u ciyaarayey koobkii SECAFA ama xulalka bariga iyo bartamaha afrika, waxaa uu ahaa nin ay aad u dhibsan jireen kooxaha Abaluya iyo Gurmahiya ee dalka Kenya.
Burburkii Dalka kadub waxa uu Ducaale waxaa kaloo uu hore ugu soo ciyaaray kooxda Zamaalik ee dalka Masar, in kastoo ay gaabnayd muddada uu u ciyaarayay, waxaa kaloo uu u soo ciyaaray kooxda al-wixda ee dalka Imaaraadka, ugu dambayntii wxaa uu ka mid noqday ciyaartoyda kooxda Al-Telaal ee dalka Yemen, taasoo uu u qaaday horyaallo iyo koobka koonfurta dalka Yemen, sidoo kale waxaa uu ka mid noqdey xulka Yementa koonfureed muddo fara badan kadibna wuu ka fariistay ciyaaraha.
waxaa kaloo soo noqday Tababare ama macallin maaddada xagga dhismaha jirka dugsi sare oo ku yaalla magaalada cadan,waxaa kaloo tababare u kooxda al-tellaal oo ka mid ah kooxaha ugu faca wayn dalka yemen ,waxaana la asaasay naadigaasi sannadkii 1905-kii.
Siciid Ducaale waagii uu u ciyaarayay Horseed waxaa uu ku caan baxay degenaan, dabci wanaagsan iyo farsamo kubbadeed oo aad u sarreysa, haatanna waxaa uu ku nool yahay magaalada Doha ee Dalka Qadar, isagoo dhul yaal ah, waxaana Ummadda Soomaaliyeed ka codnayaa inay duceeyaan Ciyaartoogaasi Soomaaliya guulo badan gaarsiiyay, wuxuu haatan u baahan yahay Ducadiinna.
Sawirkan dambe waa Saciid Ducaale iyo Saaxiibkiis Xasan Cafiif oo ay Kooxda Horseed iyo Qaranka Soomaaliyeedba u soo wada ciyaareen.
W.D. C/lahi Ruush